Euclidea | အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » Euclidea
Euclidea APK ကို
Euclidea Euclidian Construction Create တစ် FUN & Challenge Way ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်> 120 Levels: အလွန်လွယ်ကူသောအနေဖြင့်တကယ်ခက်ဖို့
> 11 ကျူတိုရီရယ်
> 10 ဆန်းသစ်သော Tools များ
> â€œExploreâ€ Mode ကို
> အလွယ်တကူဖိဆွဲပါ, မှန်ဘီလူး & ပန်
နယူးအဆင့်ဆင့်ကိုသင်ယခင်သူတွေကိုဖြေရှင်းသော့ပွင့်ကြသည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်ကြယ်ဝင်ငွေလျှင်သင်သာတပြင်လုံးကိုဂိမ်းဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်. သင်ဤကန့်သတ်ဖယ်ရှားသော IAP ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။
€œEuclidea appPicker "€€âdevelop.âရန်, စိတ်ကူးစိတ်သန်း, ပင်ကိုယ်နှင့်ယုတ္တိဗေဒနှင့်အတူကူညီပေးဖို့အားလုံးအံ့သြစရာကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသထားပြီးâ
€œEuclideaâတိုင်းသင်္ချာကျောင်းသားရှိသင့်နှင့်တစ်ဦးစံပြကမ်ဘာပျေါတှငျသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူâ€like.â€ "non-အသေးအဖွဲဂိမ်းများသင့်ကြောင်း€|itâ€™ sa ဂိမ်းplayâတစ်ခုအကြွင်းမဲ့အာဏာဝမ်းမြောက်တတ်
*** Euclidea အကြောင်း ***
Euclidea Euclidian ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူပျော်စရာစူးစမ်းခြင်းနှင့်ရှိသည်, တွေအကြောင်းသင်ယူဖို့တစ်ချက်မူရင်းလမ်းပါ! သင့်ရဲ့တာဝန်ဟာ straightedge နှင့်သံလိုက်အိမ်မြှောင်နှင့်အတူဂျီဩမေတြီတည်ဆောက်မှုများကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျရွေ့လျား၏အနည်းဆုံးအရေအတွက်အများဆုံးလှပသောရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ဒီဇိုင်းလြှငျ, youâ€™အမြင့်ဆုံးရမှတ်ဝင်ငွေကြည့်။ ဖြေရှင်းချက်လိုင်းများ (L ကို) နှင့်မူလတန်း Euclidean တည်ဆောက်မှုများ (E) တွင်သွင်းယူနေကြသည်။
*** ရိုးရှင်းသော Start နှင့်ပိုမိုထိရောက်သောရယူပါ! ***
သငျသညျသင်္ချာ wizard ကို ta €™ Arena လျှင်Donâ€™ t ကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ Euclidea အခြေခံအားဖြင့်သင်တို့ကိုလမ်းပြသောအရိုးရှင်းသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူထွက်စတင်သည်။ သငျသညျအခြေခံကျွမ်းကျင်ပြီးတာနဲ့youâ€™ထိုကဲ့သို့သောပြင် / အတွင်းစိတ်တန်းဂျင့်များ, ပုံမှန်အစည်းအဝေးအနားနှင့်ထို့ထက် ပို. အဖြစ်အခိုင်အမာပိုပြီးစိတ်ထဲ-ကွေးစိန်ခေါ်မှုများအပေါ်ကိုရွှေ့လိုက်သည်။ ရိုးရှင်းတဲ့အညွှန်းများအတွက်အထုပ်ထဲမှာစုစည်းထားသည့်စုစုပေါင်း 120 ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများရှိပါတယ်။
*** သင့်ရဲ့ Interface ကိုမှဆောက်လုပ်ရေး Add ***
သငျသညျ "ဒီလိုထောင့် bisectors non-ပြိုလဲသံလိုက်အိမ်မြှောင်, ဒါကြောင့်â€အပေါ်အဖြစ်" €âအချို့သိသိသာသာတည်ဆောက်မှုများသင်ယူတဲ့အခါမှာသူတို့ကအလိုအလျှောက်သင်အချိန်ကိုကယ်တင်ကူညီပေးသည်နှင့်သင်သည်စင်ကြယ်ဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်သော Euclidea interfaceâ€™ s ကိုဖြတ်လမ်းမှဆက်ပြောသည်နေကြတယ်, uncluttered ရေးဆွဲ။
*** အလွယ်တကူ *** ပန် & မှန်ဘီလူးဆွဲပါ
Euclidea ဖန်တီးတည်ဆောက်မှုများလုံးဝပြောင်းလဲနေသောဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်တို့သည်ဤမျှအပေါ်ထောင့်, လိုင်းများ, radii နှင့်ထိန်းညှိဖို့ဆွဲယူနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းလွယ်ကူစွာချဲ့ခြင်းနှင့်ဝေ့နိုငျသညျ။ ဒါကအတွေ့အကြုံပိုပြီးအပြန်အလှန်စေသည်သာမက, ဒါပေမယ့်သူကသင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ, ဂျီဩမေတြီဒြပ်စင်အကြားဆက်ဆံရေးကိုဆုပ်ကိုင်အမျိုးမျိုးသောဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာစူးစမ်းနှင့်အမှားများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
*** လက်ငင်း, Automatic Precision ***
Donâ€™ Euclidea အလိုအလျောက်appâ€™ s ကိုသန့်ရှင်းတဲ့ interface ကိုမှတ်, လိုင်းများနှင့်စက်ဝိုင်းတစ်လကတာဝန်ကိုင်တွယ်နေသောကြောင့်စုံလင်တိကျစွာအောင်မြင်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေအချိန်သို့မဟုတ်အားထုတ်မှုဖြုန်းအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန် t ကို။
*** နောက်ထပ်အထူးအင်္ဂါရပ်များ ***
သင်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပုံကိုကြည့်ပါရန်ခွင့်ပြု> တစ်ဦးကအထောကျအကူâ€œExploreâ€ mode ကို
> တစ်ဦးကိုသင်တိုးတက်မှုအဖြစ်ကိုသင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ tools များ၏စာရင်း€ "youâ€™အနာဂတ်စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်ဤလိုအပ်ပါတယ်ကြည့်
> တချို့ကစိန်ခေါ်မှုများသင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်းကြိုးစား ပို. ပင်ပျော်စရာရှိနိုင်ပါသည်, ဆိုလိုတာကတစ်ဦးထက်ပိုလမ်းအတွက်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်
*** မေးခွန်းများ? မှတ်ချက်များ?
သင့်ရဲ့မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအတွက် Send နှင့် http://www.euclidea.xyz/ မှာနောက်ဆုံးပေါ် Euclidea သတင်းအပေါ်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်နေဖို့
â€ "သင်၏တည်ဆောက်မှုများသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်ပွနျလညျထူထောငျနိုငျသညျ။ အားလုံးဖြေရှင်းချက်အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းနေကြသည်။
Trapezoid Basesâ€၏€œArithmeticအဓိပ္ပာယ် 5.5
â€ "အခုသင် (œSettings€âကိုရှေးခယျြ - €developersâမှ> ကျေးဇူးတင်ပါသည်) IAP မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်သင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖျောပွနိုငျ
26.09 ကို MB